Mogadishu Journal » 2019 » January » 18
Mjournal :-Wararka ka imaanaya gobolka Baay ayaa sheegaya in maanta uu dagaal xooggan dhex maray ciidamo Ethiopian ah iyo dagaalyahannada Ururka Al-Shabaab. Dagaalka ayaa ka dhacay meel ku dhow tuulada Deynuunaay oo u dhaxeysa Baydhabo iyo degmada Buur Hakaba, ka dib markii...
Xulka kubadda cagta ee dalka Qatar ayaa 2-0 uga adkaaday dhiggiisa uu xifaaltanka weyn uu ka dhexeeyo ee dalka Sacuudi Carabiya, ciyaar ka tirsaneyd Koobka Qaramada Aasiya. Kulankaasi oo xiisa gaar ah lahaa, isla markaana loogu magac daray “Blockade Derby” ama kulanka adag ...
Al-shabaab : waxaan dilnay 53 askari
Mjournal :-Faah faahin ayaa ka soo baxaya dagaal maanta ka dhacay inta u dhaxeysa magaalooyinka Buurhakaba iyo Baydhabo ee Gobolka Baay, kaddib markii Kolonyo Ciidamo Itoobiyaan oo ka soo baxay Buurhakaba ay ay weerareen dagaalamayaal ka tirsan Al-Shabaab. Sida wararka sheegayaan...
Madaxweyne Farmaajo oo kulan gaar ah la yeeshay Madaxweyne ku xigeenka Puntland
Mjournal :-Madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa magaalada Baydhabo kula kumay madaxweyne ku xigeenka dowlada Puntland Axmed Cilmi Cismaan (Karaash) iyagoo ka wadahadlay sidii loo wanaajin lahaa xiriirka dowlada federalka iyo Maamulka Puntland. ulankan ayaa...
Koonfur Galbeed oo xoog kusoo furaneysa dad ay Afduubteen Shabaab
Mjournal :-Maamulka Koonfur Galbeed ayaa ku dhawaaqay in ay xoog kusoo furan doonaan ku dhawaad 100 qof oo Al-Shabaab ay ka Afduubteen degaano hoos yimaada degmada Xudur ee gobolka Bakool. Wasiir ku xigeenka Wasaaradda Amniga maamulka Koonfur Galbeed Cabdirisaaq Cali Aadan aya...